Xildhibaan Maryan Haaruun “Haddii daqliga uu kordhay maxaa diiday in shaqaalle cusub la qoro?” – Kalfadhi
Xildhibaan Maryan Haaruun oo ka mid ah Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegtay in mar walba ay u caddaato in daqliga uu kordhay, laakiin daqliga gudaha uu hoos u dhac ku yimid sababo la xiriira cudurka safmarka ee COVID-19.
Marwo Maryan, ayaa is weydiisay haddii daqliga uu kordhay waxa diiday in shaqaallo cusub la qoro, madaama saddex sanno iyo bar oo xukuumadda ay joogtay aanan la qorin shaqaalle.
Waxaa ay soo jeedisay si dhallinyarrada aysan al shabaab u raacin, in la sameeyo daqli loogu talagalay dhallinyarrada jaamacadaha soo dhammeysatay.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda XFS Mudane Cabdullahi Sheikh Cali Qaloocow, oo 5-tii bishii Julay ka hadlay akhrinta 1-aad ee ku noqoshada miisaaniyadda sannadka 2020, ayaa wax laga weydiiyay arrimaha ku saabsan shaqaalla qorista.
Mudane Qaloocow, ayaa Baarlamaanka u sheeqay in aan shaqaalle cusub la qorin tan iyo markii ay timid dowladda hadda jirta sannadkii 2017. Waxaa uu intaasi u sii raaciyay in aan haddana shaqaalle cusub la qorin karin.
Wasaaradda Shaqadda, wasaaradda Maaliyadda iyo wasiir Bayle, intaba awood uma lahan shaqaalle cusub in ay qoraan, sababtanna annaga ma ahan ee dusha ayaa nagala heystaa, waxaa na heysta IMF, ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
“Shaqaallaha lama kordhin karo, wasiirka wuu ku dhibtooday, wasaaradda shaqaddana wey ku dhibtootay. Waa suura-gal haddii wax la helaayo in sannadka dambe shaqaallaha KMG ah wax loo helo”.
Bishii march ee sannadkan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bixisay lacagihii Hay’adda horumarinta Caalamiga ah ay ku laheed Soomaaliya si loo dhammeystiro soo celinta xiriirka caadiga ah ee Soomaaliya iyo Bangiga Adduunka.
Siyaasiyiinta mucaaradka iyo xisbiyada ayaa dowladda dhowr jeer ku dhaliilay in ay ka gaabisay in shaqaalle cusub ay ku biiriso dowladda.